INJIRTA TIMAHA GASHA - Somali Kidshealth
13/09/2013 12/03/2020 by admin
Waalidiin badan ayaa ka qajila haddii ilmahooda madaxyadooda lagu arko in injiri gashay. Laakiin welwel badan in la qaado ma fiicna, waayo injirtu ma gudbiso cudduro kale oo aan ka ahayn inay ilmaha ku rido cuncun madaxa ah oo laga yaabo in xoqitaanka badani u keeno in madaxu nabro yeesho ama infakshin ku dhaco dhalada ilmaha. Xigmada saxda ah waa markiiba in la daaweeyo ilmaha lagu arko calaamadaha injirta.
Injirtu waa cayayaan dul-ku-noole ah oo malko ka dhigta timaha. Waxay injirtu dhuuqdaa oo dheefsataa dhiigga binu-aadamka. Carruurta jirta 3 ilaa 12 sanno ayay dhacdaa inay ku dhalato timaha madaxooda. Injirtu waxa kale oo ay gali kartaa dharka ilmaha yar yar. Inta badan injirtu waxay haleeshaa gabdhaha maadaama gabdhaha inta badan timo dheer ay la baxaan.
Injirta Timaha madaxa.Photo by Sean Gallup/Getty Images
Meerto nololeedka injirta timaha gasha
Marka ay ilmaha ku dhacdo injirta qaangaarka ahi waxay dhigi kartaa maalintii ugu yaraan 10 ugxamood ama qandhicil. Ugxantaasi waxay ku dilaacdaa oo ay ku noqotaa injiro yar yar muddo 7 ilaa 12 maalmood ah. Dabadeed injirihii yar yaraa waxay ku qaangaaraan muddo u dhaxaysa 9 ilaa 12 beri oo kale. Injirtaas qaangaartay maalmo yar ka dib waxay u diyaar tahay inay dhigto ugxan ilaa uu dhamaanayo cimriga injirta oo u dhexeeya 3 ilaa 4 asbuuc.
Habka ay u fido injirtu
Injirtu waa cayayaan aad u fida oo qofba qofka kale u gudbin karo si deg dega ah. Maahan injirtu cayayaan duula ama booda, laakiin dullinkaani waxay leeyihiin cidiyo xirfadaysan oo ay ku xamaaran karaan ama ku qabsan karaan timaha. Inta badan waxay ku gudubtaa marka carruurtu ciyaarayaan oo ay madaxyada isku qabtaan ama timaha madaxoodu kulmo. Shanlada la wadaago ama dharka iyo gogosha la wadaago waa la isagu gudbin karaan.
Calaamadaha lagu garto injirta
Inkastoo injirta timaha gasha ay tahay cayayaan aad u yar haddana isha binu-aadamka waa lagu arki karaa. Haddii waalidiinta iyo dhaqtarku timaha ilmaha si fiican u eegaan waa la arki karaa injirta ama qandhicilka ay ku dul dhashay timaha. Calaamadaha kale ee injirta kuwaan ayaa ka mid ah:
Ilmaha oo madaxa xoqa
halka ay qaniintay injirtu oo gaduudata
Mararka qaar meesha ay qaniintay injirtu waxay yeelataa qolof iyo caabuq-maqaareed.
xasaasiyad ka kacda goobta injirtu qaniintay.
Qanjirada qumanka ama qoorta oo barara
Qandhacilka ama ugxanta injirta oo suran timaha ilmaha.
Waalidiinta waxaa u wanaagsan inaysan ka welwelin injirta gashay timaha ilmaha. Sidoo kale ma fiicna in ilmaha la tokooro ama la ceebeeyo. Daawaynta injirtu aad bay u sahlan tahay. Qaar ka mid ah waalidiintu waxayba goostaan inay ilmaha timaha madaxa ka xiiraan, dabadeedna nadaafada guud ee timaha soo baxaya lagu dadaalo.
Dhaqtarkaagu haddii la xaqiiqsado in ilmaha timaha madaxa injiri ka gashay wuxuu kuu qori karaa shaambo cayayaan-dile ah ama kareem timaha madaxa lagu subkayo. Daawooyinka cayayaan-dillaha ahi waxay dilayaan dhamaan injirtii timaha ku jirtay iyo ugxanteediiba. Shaambooyinka bilaa rijeetada la helo waxaa ka mid ah Permethrin 1%(Nix) iyo Rid.
Waxaa kale oo dhaqtarkaagu kugula talin karaa inaad timaha ilmaha lagu shanleeyo shanlo ilko yar yar leh si looga fujiyo qandhicilka timaha ilmaha.
Waxaa muhiim ah waalidiintu inay daawooyinka cayayaan-dillaha ay sida loogu sharaxay u isticmaalaan. Daawooyinka cayayaanka dila haddii marar badan la isticmaalo ama si xun loo isticmaalo waxay gaysan karaan waxyeelo.
Dhaqtarkaagu wuxuu kugula talin karaa in daawaynta lagu celiyo 7 ilaa 10 ka dib si ugxantii laga yaabo inay dib ka dhalatay loo dilo.
Dharka iyo gogosha ilmaha sida harqadaha barkimaha waxaa muhiim ah in lagu mayro biyo kulul amaba si fiican loo feereeyo.
Tagged injirta, qandhicil, timaha, ugxan